Yayinjani into yokuqala yokulwa emva kokuba u-Joshua osindayo emva kweKlitschko: iifoto | TeraNews.net
Waba njani umlo wokuqala emva kokuba u-Joshua osindayo emva kukaKlitschko: ifoto
umbhali ubugcisa Papashwe ngomhla 09.11.2017
Umdlalo wamanqindi owaziwayo wase-Ukraine ongumlingisi wamanqindi waseBrithani, u-Anthony Joshua, uphinde waphumelela uloyiso kwimpumelelo ye-duel kunye nembangi evela e-Cameroon - Carlos Takama. Umlo wenzeka e-Millenium Stadium kwikomkhulu lase Wales, eCardiff. Khumbula ukuba sithetha ngalomfo waseNgilani, owathi 29 ngo-Epreli 2017 ngonyaka ngokungqongqoza eWembley Stadium eMonti, waphumelela umdlalo ngokuchasene noWladimir Klitschko.
Iingcali zemidlalo zifumana izinto ezininzi ezingaqhelekanga kwibala leembaleki ezisindayo ezivela kwiinkungu ze-Albion kunye neAfrika ephakathi. Njengoko kwenzeka, abaqeqeshi baka-Anthony Joshua babelungiselela iimbaleki ukuba zilwe kunye nengcali yaseBulgaria, uKurbat Pulev, owathi ngenxa yokulimala waphulukana nomdyarho weentsuku ze-12 ngaphambi kweNdebe yeHlabathi. Ukuze bangarhoxisi ukhuphiswano, abaququzeleli bazimisele ngokukhangela umntu ongenaNgesi. Kwavela ukuba kunzima ukufumana isisindo esinzima, kwaye neside, yiyo loo nto bezinza eCameroon.
Umlo wajika wanomdla kubalandeli, esele sikumjikelo we-4 waluxabisa uqeqesho kunye namandla omgcini wamanqindi wase-Afrika, owachitha i-Briton. Nangona kunjalo, sele sikumjikelo weshumi, ithamsanqa yafudukela kumfo waseNgilane, othe waphumelela umlo ngenxa yomlo usiya phambili. Ukujonga ingxelo evela kubaphulaphuli kwiinethiwekhi zentlalo, uTakam wayemi ngeenyawo kwaye eqhubeka nomdlalo, ngaloo ndlela ebuza imibuzo engathandekiyo kubaququzeleli bokhuphiswano.
Ngokutsho komntu ophumeleleyo, ukunqongophala kwamalungiselelo kuthintele iCameroon ukuba ingakhutshelwa ngaphandle. Abasebenzi abaqeqeshi balungiselela uJoshua kumlo wokulwa kunye ne-Kurbat Pulev yeemitha ezimbini, ehlengahlengisa imeko kunye nama-punches ekukhuleni komchasi. Mhlawumbi ukusebenza ekwaza kunye neqela elincinci kuya kunceda iimbaleki ukuba ibeke umAfrika ngaphambili. Kodwa njengoko besitsho, abaphumeleleyo abagwetywa-ibhanti leentshatsheli kunye nehlombe le-75 yenkulungwane yesininzi ukuya ku-Briton Anthony Joshua.
I-Adidas CG Polta AKH I i-sneakers: iisimboli zeClimacool JawPaw kunye neSamba
I-Matcha iti: yintoni, izibonelelo, indlela yokupheka kunye neyokusela
I-Xiaomi Yi Sport-ikhamera yesenzo kuwo onke amaxesha
Treadmill: izibonelelo kunye nezinto ezilungileyo
© 2020 - Teranews. Onke amalungelo agciniwe.